Ololaha Talaalka Xoolaha Oo Ka Socda Degmada Birqod - Cakaara News
Ololaha Talaalka Xoolaha Oo Ka Socda Degmada Birqod
Birqod(cakaaranews)Talaado 22ka, November 2016. Xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha iyo qaar kamid ah maamulka degmada birqod oo uu horkacayo Gudoomiyaha Degmada Birqod mudane Fu’aad Yuusuf Maxamed ayaa si rasmi ah u bilaabay Ololoha talaalka xoolaha ku dhaqan degmada Birqod iyo nawaaxigeeda.
Hadaba, Gudoomiyaha Degmada Birqod Ee Gobolka Jarar mudane fu’aad yuusuf oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in iyagoo iskaashanaya xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha iyo maamulka degmadu ay si heer sare ah uga wadaan ol-olihii talaalka xoolaha. Wuxuuna intaa kudaray in wakhti xaadirkan ay talaalka kawadaan senterka Garigo’an iyagoo soodhameeyay talaalkii centerka Ceelxeer. Gudoomiyaha oo hadalkiisa siiwata ayaa tilmaamay in ol-olhani uu socon doono mudo 7 maalmood ah islamarkaana talaalka laga samayn doono dhamaan tuulooyinka hoosyimaada degmada Birqod.
Ugudanbayna gudoomiyaha ayaa sheegay in sidookale dawooyinka xoolaha ee muhiimka ah loo qaybiyay xoolo-dhaqatada ku nool degmada birqod islamarkaana aad ugu riyaaqeen iyagoo sheegay in dawooyinka lasiiyay ay aad ug baahnaayeen.